चिनियाँ विदेशमन्त्रीलाई बढी महत्व दिएको भन्दै सांसद सिंहको आपत्ति
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सांसद अमरेशकुमार सिंहले दुई छिमेकी मुलुक चीन र भारतका विदेशमन्त्रीलाई नेपाल भ्रमणको क्रममा फरक व्यवहार गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । सांसद सिंहले संसदको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै चिनियाँ विदेशमन्त्रीलाई भन्दा भारतका विदेशमन्त्रीलाई कम महत्व दिएको आरोप लगाए ।
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सांसद अमरेशकुमार सिंहले दुई छिमेकी मुलुक चीन र भारतका विदेशमन्त्रीलाई नेपाल भ्रमणको क्रममा फरक व्यवहार गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
सांसद सिंहले संसदको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै चिनियाँ विदेशमन्त्रीलाई भन्दा भारतका विदेशमन्त्रीलाई कम महत्व दिएको आरोप लगाए ।
उनले नाम नलिएरै भारतीय विदेश मन्त्रीको तुलनामा चिनियाँ विदेश मन्त्रीलाई बढी महत्व दिइएकोतर्फ संकेत गर्दै सरकारको व्यवहारप्रति आपत्ति जनाएका हुन् ।
‘दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमण भयो । एउटा परराष्ट्रमन्त्रीलाई स्वागत गर्न परराष्ट्र सचिव जान्छ, अर्को छिमेकीको परराष्ट्रमन्त्री आउँदा मन्त्री जान्छ’, उनले भने, ‘एउटा परराष्ट्रमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री भेट्दा राजारैति जस्तो गरी भेट्छ, अर्कोलाई बराबरीको अवस्थामा भेट्छ । के परराष्ट्र मन्त्री र प्रधानमन्त्री बराबरीका हैसियतमा भेट्न मिल्छ? भेटेको र झण्डा राखेको छ? दुवै सरकारी भ्रमण थियो निजी भ्रमण थिएन।’
यस्तै सांसद सिंहको नेपालले परराष्ट्र नीतिलाई बेवास्ता गरेको समेत आरोप छ ।
‘इन्डो–प्यासेफिक र बिआरआईका विषयमा कुरा उठिरहेको छ । यो रणनीतिक विषय हो । यसमा सहभागिता लगायतका विषयमा सरकारले सर्वपक्षीय सहमति गर्नुगर्छ’, सांसद सिंहले भने,‘ हाम्रो परराष्ट्र नीति असंलग्न र सहअस्तित्वमा आधारित हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। सरकार भनिरहेको छ–हामी इन्डो प्यासेफिकमा सहभागी छ्रैनौँ । अमेरिक भन्छ नेपाल सहभागि छ ।’